“Kulanka Napoli wuxuu inooga muhiimsan yahay xitaa hogaanka Premier League” – Klopp – Gool FM
(Liverpool) 10 Dis 2018.Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka adag tartanka Champions Leagu ay habeen dambe ku soo dhaweyn doonaan kooxda Napoli garoonka Anfield.
Kulankan ayaa ka tirsan kulamada 6-aad ee lagu soo gaba gabeenayo heerka group-yada tartanka Champions Leagu ee xili ciyaareedkan, Reds ayaa haday guul gaarto kulankan waxay u gudbi doontaa wareega xiga ee 16-ka.
Jürgen Klopp ayaa kahor kulankan wuxuu kasoo muuqday shir jaraa’id wuxuuna ka hadlay awooda kooxda Napoli, iyo sida ay u adag tahay xaalada kooxdiisa Liverpool.
“Waan ognahay inaan si fiican u ciyaarin kulankii Napoli ee dalka Italy, sidoo kale waxaan xumeyn kulankii Red Star Belgrade”.
“Balse waxaan xoogaa soo fiicnaanay kulankii Paris St Germain ee dalka France, laakiin waan guuldareysanay, taasina ma ahan waxa dhici kara”.
“Kulanka barri ee garoonka Anfield, waxaan heysanaa fursad weyn, way fiicnaan laheyd hadii aan kaga gudbi lahayn sida ugu fiican, fursad ayaan heysanaa waana sameyn doonaa wax walba si aan uga faa’iideysano”.
“Waxaan weli ku jirnaa bisha December, Christmas-ka weli lama gaarin, xilli ciyaareedkan wuxuu dhamaan doonaa bisha May, wali waxaa harsan kulamo badan iyo dhibco badan, muhiim ma ahan hogaaminteena hogaanka horyaalka Premier League ee xiligan, sababtoo ah waxaan bari wajaheynaa kooxda Napoli”.